Imepe US: ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke yana nnwale COVID-19 adịghị mma achọrọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Imepe US: ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke yana nnwale COVID-19 adịghị mma achọrọ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Imepe US: ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke yana nnwale COVID-19 adịghị mma achọrọ.
Ọchịchị Biden kwupụtara na United States “ga-apụ na mmachi obodo site na mbụ etinyere ya” wee nakwere amụma “nke dabere na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa iji kwalite mmalite nke njem ụgbọ elu mba ụwa” na US.
A ga-ebuli mmachi njem njem US, nke amachibidoro na Machị 2020 na nke Biden megharịrị na mbido afọ a, n'ime izu abụọ.
A ga-eji mmachi ọhụrụ gụnyere ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na nchọta kọntaktị dochie mmachi ndị na-apụ apụ.
Ọgwụ mgbochi ndị anabatara ga-abụ naanị ndị akwadoro ma ọ bụ nyere ikike nchịkwa nri na ọgwụ US ma ọ bụ Healthtù Ahụ Ike wa.
Ụlọ White House ekwuputala na ndị ọbịa mba ụwa na-abanye na US Mgbe obodo mepere emepe na Nọvemba 8 ga-eweta ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke yana nsonaazụ na-adịghị mma nke nnwale COVID-19 mgbe mbata.
Na nkwupụta ewepụtara taa, nchịkwa Biden kwupụtara na nke ahụ United States "ga-apụ site na mmachi obodo-site na nke etinyere na mbụ" wee nakwere amụma "nke dabere na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa iji kwalite mmalite mmalite nke njem ikuku mba ụwa" na US.
A ga-ebuli mmachi njem njem US COVID-19, nke ewepụtara na Machị 2020 ma megharịa na mbido afọ a, n'ime izu abụọ, mana a ga-eji mgbochi ọhụrụ metụtara ọnọdụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na ịkpọtụrụ kọntaktị dochie ya.